Mkpụrụ osisi gbanye mgbọrọgwụ nwere ike gbanwee Ntupụta Mkpụrụ Nduku Na India - Potatoes News
N'ime iri afọ ise gara aga, mmepụta nduku na India na-arịwanye elu site na ihe ruru nde tọn 8.3 na 1980 ruo nde tọn 48.6 na 2017, mmụba nke ihe karịrị 500 percent.
India bu onye nke abuo na ndi ahia ahia nke ukwu n’uwa. N'ime iri afọ ise gara aga, mmepụta nduku na-arịwanye elu site na ihe ruru nde tọn 8.3 na 1980 ruo nde tọn 48.6 na 2017, mmụba nke ihe karịrị 500 percent.
N'ime afọ iri gara aga, mmepụta a amụbaala karịa pasent 60 yana mpaghara abụọ na mkpụrụ na-esokwa na-abawanye. Mkpụrụ akụ nduku mba na 2017 dị gburugburu tọn 24 kwa hectare. Agbanyeghị, enwere ọdịiche dịgasị iche na ọkwa mkpụrụ na India, sitere na tọn 31.5 kwa hectare na Gujarat ruo tọn 10 kwa hectare na Assam. N'etiti ihe mgbochi dị iche iche maka uto mkpụrụ, a na-ahụta oke nnweta nke mkpụrụ osisi dị ka ihe kachasị mkpa maka ogo mkpụrụ dị ala na mpaghara ọwụwa anyanwụ. Ọnụ ego dị elu nke mkpụrụ (Rs. 60,000-75,000 kwa hectare), nke ruru pasent 40-50 nke ngụkọta ego nke mmepụta, abụrụla isi ihe mgbochi nye obere ndị ọrụ ugbo ịmalite ịmalite ọrụ n'ọtụtụ n'ime steeti ndị a.
Na India, a na-eji mkpụrụ nduku emepụta na Punjab site na iji usoro ọgbụgba mkpụrụ osisi na teknụzụ aeroponic wee buga ya ihe ruru puku kilomita abụọ na steeti na-eto eto nke ọwụwa anyanwụ na ndịda India. Transportationgwọ njem dị elu bụ nke ndị ọrụ ugbo dara ogbenye bụ ndị ga-akwụkwa ọnụ ahịa mkpụrụ dị elu. Iji mee ka ihe ka njọ, ọnụahịa dị elu anaghị ekwe nkwa ịdị mma dị elu, yabụ na-eme ka o siere ndị ọrụ ugbo pere mpe na ndị pere mpe ike itinye ego buru ibu na nzụta mkpụrụ nke na-akpata ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ego zuru ezu nke mmepụta. Mgbasa nke teknụzụ aeroponic bụ naanị na Punjab n'ihi nnukwu ego ọ chọrọ yana ogologo oge ịmụ nwa nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ anọ. tupu nloghachi ọ bụla abata.
Ọ bụrụ na enwere ike ịnweta teknụzụ dị ọnụ ala iji mepụta nduku mkpụrụ na ọnụ ahịa dị ọnụ ala karịa steeti ndị a dị n'ọwụwa anyanwụ na ndịda nwere nnukwu ikike ịbawanye mmepụta nduku site na imeziwanye arụmọrụ na iwetulata ọnụahịa nke mmepụta. Ala na gburugburu ebe obibi n'ọtụtụ mpaghara ọwụwa anyanwụ na mpaghara ndịda dị mma maka ịkọ mkpụrụ nduku na rabi oge (Ọktọba-Machị) na mpaghara ụfọdụ dị ka Hassan na Karnataka na Koraput na Odisha enwere ike itolite na kharif oge (July-October). Kpọmkwem, steeti ndị ugwu ọwụwa anyanwụ nwere ike ịbụ ebe mkpụrụ nduku na-enye mkpụrụ na West Bengal, Odisha na Bihar.
Apical Mgbọrọgwụ Cuttings
Mkpụrụ osisi gbanyere mkpọrọgwụ nwere ike ịbụ azịza maka nsogbu mkpụrụ nduku nke India na-adịte aka site na ịkọwapụta mkpụrụ mkpụrụ na iweta ya nso na eriri mmepụta. Ngwunye apical bụ ihe ọzọ na sistemụ mkpụrụ osisi aeroponic dị ugbu a. Ma aeroponics na apical cuttings abuana anụ ahụ omenala plantlets. Na aeroponic, a na-eji obere ahịhịa dị iche iche na-emepụta obere tubers site na iji teknụzụ kpụ ọkụ n'ọnụ kpụ ọkụ n'ọnụ n'ụlọ ụlọ, ebe a na-eji mkpụrụ osisi apical eme ihe ọkụkụ nke anụ ahụ dị ka nne nne na coco olulu maka ịmị mkpụrụ.
N’izu isii, a ga - amụba otu osisi nne na - ewepụta osisi asatọ (Ọgụgụ 8) ma ọnụọgụgụ na - aga karịa 1 n’ime izu iri na abụọ A na-ebugharị mkpụrụ osisi ndị a n'elu akwa mkpụrụ osisi ma gbanye mgbọrọgwụ, a na-akwaga ha n'ụlọ net ma ọ bụ n'ọhịa na-emepụta obere tubers ma ọ bụ mkpụrụ tubers. Emeela teknụzụ dị ọnụ ala na Vietnam ọtụtụ iri afọ.
Ebe Akwukwo Akwukwo nri & Okpuru Osisi (PVFC) na Dalat, Vietnam bu onye ndu ndi gbanyere mkpọrọgwụ na -emepụta obere tubers na mkpuru nkpuru. N’ebe a, a na-eresị ndị na-akọ mkpụrụ mkpụrụ osisi ahịhịa na trays na-ebuga ha n’ọhịa na igwe kwụ otu ebe na obere gwongworo maka ịmịpụta mkpụrụ mkpụrụ na ụlọ ụgbụ ma ọ bụ mbara ọhịa (ọgụgụ 2).
A na-ebugharị cuttings na igbe ifuru na 3-4 n'ígwé na mpempe akwụkwọ plastik dị ọcha n'etiti ọkwa ndị CIP (International Potato Center) ndị ọkà mmụta sayensị mepụtara na Africa. A na-amụba tubers mkpụrụ ndị a ma resịrị ndị ọrụ ugbo dị ka poteto mkpụrụ. Farmersfọdụ ndị ọrụ ugbo na-eji ihe mgbọrọgwụ mkpọrọgwụ ha eme ihe kpọmkwem iji na-emepụta tubers n'ọhịa. Ọbụna enwere ndị ọrụ ugbo nọ na Vietnam bụ ndị guzobere obere akụrụngwa akụrụngwa, ụlọ nyocha maka osisi nne na mkpụmkpụ na n'ikpeazụ ụlọ ụgbụ maka ịfefe mkpụrụ osisi gbanyere mkpọrọgwụ maka imepụta obere tuber. Onyonyo 3 na-egosi ebe ana - akọ mkpụrụ nduku osisi nke Oriakụ Luong Thi Thu Lan nke dị na Dalat, Vietnam onye na - arụ ọrụ ebe a ọtụtụ afọ ugbu a.
Dabere na azụ anyị na ngụkọta envelopu ahụ, osisi ọkụkụ gbanyere mkpọrọgwụ nwere ike ịdị ihe ruru otu narị ma ọ bụ karịa obere, na mkpa 25,000-35,000 kwa acre. Mbepu ọ bụla nwere ike mepụta tubụ 7-10 na oge ụfọdụ ọbụna karịa nke a na-abawanye ugboro 2-3 tupu eresị ya ndị ọrụ ugbo dịka mkpụrụ.
Ihe ngosi na icha elu nke nkpuru osisi apical
Anyị na-edozi ụlọ ọrụ mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ na Bengaluru na mmekorita ya na Mahadum Horticultural Sciences (UHS) n'ime ụlọ akwụkwọ ha Bengaluru. Nke a ga-agụnye ụlọ ọrụ ọdịbendị anụ ahụ nke ga-agụnye 20,000 in-vitro osisi nke ụdị ndị a ma ama, 500 ụlọ mita anọ na-achịkwa ihu igwe na-ewepụta ihe karịrị 100,000 egbutu kwa oge yana nkeji 10 nke ụlọ ụgbụ oge ọ bụla na 0.25 acre ọ bụla iji mepụta tubers sitere cuttings maka inwekwu multiplic na ọhịa.
N'adịghị ka na Dalat ebe a na-akụ osisi n'ọhịa ka ihu igwe nwere ọtụtụ ihe ọmụmụ nwere obere ọrụ, anyị na-ezube itolite ha n'ime ụlọ ụgbụ oge iji kwekọọ n'ọnọdụ mpaghara Bengaluru na Hassan. Somefọdụ akụkụ ndị ọzọ nke India, ọ ga-ekwe omume itolite cuttings ndị a n'ọhịa dị ka Dalat. N'otu aka ahụ, a na-ewu ụlọ ọrụ na ọdụ nyocha nke Mahadum Hassan. Anyị na-ezube ịtọlite ​​ọtụtụ ụlọ ọrụ dị na Koraput, Odisha, Central Potato Research Institute (CPRI) Shillong.
Dabere na ntinye ego, anyị na-eme atụmatụ ịtọ ntọala na Assam na Jharkhand. A ga-eji ụlọ ọrụ ndị a niile mee ihe ngosi maka ndị ọrụ ugbo na ndị ọrụ ugbo na-aga n'ihu yana usoro na atụmatụ azụmaahịa zuru oke maka ha iji teknụzụ a wee mepụta mkpụrụ nduku. Anyị na-ezubekwa iji usoro ndị ọrụ ubi buru ibu (SFLF) (bipụtara na mbụ https://indianexpress.com/article/india/agricultural-economics-how-doubling-of-farmers-income-is-possible-even-with-small-landholdings-5428084/), iji kpokọta otu obere ndị ọrụ ugbo ọnụ iji teknụzụ a wepụta mkpụrụ mkpụrụ nduku.
(Samarendu Mohanty bụ Asia Regional Director, na Sampriti Baruah, ọkachamara usoro ihe oriri, na International nduku Center, Vietnam)
Tags: AH P AH SEMmepụta Mkpụrụ Nduku Na IndiaMmepụta Na India
IIT Mandi - nchọpụta ọrịa akpaghị aka na kụrụ na nduku
Igodo mkpụrụ ndụ onwe onye maka njikọ fatịlaịza na nduku achọpụtara
Ọnụ ego nduku mbụ na-ada na Russia
Etinye ego nke EUR 145m na 2nd Production Line na Lipetsk
Tinye ekwentị gị ka ọ rụọ ọrụ